Creamfields ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးပွဲတော်များတစ်ဦးနှင့်ဗြိတိန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးကခုန်ဖြစ်ပါသည် ဂီတ ပွဲတော်. သင်၏ဘဏ်များ၏အများဆုံး Make အားလပ်ရက်များ သြဂုတ်လနှင့် တစ်ဦးလက်မှတ်ဘွတ်ကင် ကျိကျိတက်ပါတီမှ!
သူတို့ကအိမျတျောကိုအနုအဆင့်ရှိ, EDM, techno, စည်နှင့်ဘေ့စ, လက်ခံထားတဲ့အစွဲ, အညစျအကွေးနှင့်ပိုပြီး, Creamfields အဆိုပါ go-မှပွဲတော်ကခုန်ဂီတပရိတ်သတ်တွေအတွက်အောင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ.
ဒါဟာနှစ်ပေါင်း 2019 ရဲ့ပွဲတော်သီးသန့်တစ်ဦးလေကြောင်းနှင့်တကွကြွလာ. သူတို့ထဲမှာအထင်ကရကခုန် supergroup ဆွီဒင်အိမ်မာဖီးယားအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးရန်သာသူမြားဖွစျလိမျ့မညျ ဗြိတိန်နိုင်ငံ. သူတို့ကအစ Deadmau5 hosting နှင့် Cirez: D ပထမဦးဆုံးစွမ်းဆောင်မှုပါလိမ့်မည် & အာဒံကို Beyer.
အဆိုပါ join 70,000 စွဲငြိဖွယ်ရာသစ်ကိုအဆင့်ဆင့်ခံစားရန်တိုင်းနွေရာသီပြန်လာကြောင်းလူတွေ, မော်ကွန်းထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်, အလင်းပြပွဲနှင့် pyrotechnics.
အမှန်ကတော့အစဉ်အလာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုခေါင်းစီးသတင်းတစ်ရက်ပုံသေနည်း forgoing, အဆိုပါစီစဉ်သူများအခွက်တဆယ်တစ်စည်းစိမ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီသည်နေ့ရက်သည်ဥပဒေကြမ်း၏ထိပ်ထုပ်ပိုးကြ, ၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုအပါအဝင် Erykah Badu, ယဉ် Impala, Solange, အနာဂတ်, Cardi B ကို, ပိုလ်, Janelle Mona, Robyn, မှာ, ခရစ္စနှင့် Queens, ဂျိမ်း Blake က နှင့် mac အတွက် DeMarco.
သူတို့အနုပညာအပေါ်တင်သောအလေးချိန်သာမကတေးဂီတလည်းဖြစ်သည်. ဆပ်ကပ်အပါအဝင်နေရာများစွာရှိသည်, ပြဇာတ်ရုံ, ပြတိုက် လေးပုံတပုံပြီးအများကြီးပို. အဆိုတော်များနှင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူတို့ရဲ့အခွက်ဖော်ပြရန်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလာ. Szitizens နှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်အနုပညာရှင်အဘို့အခွင့်အလမ်းများကိုအမှတ်ရစရာများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်လည်းရှိပါတယ် အနုပညာလက်ရာများ.
ကြောင်းလုံလောက်စွာအေးမြမကြီးဘူးဆိုရင်, သူတို့သည်လည်းနေ Eco-friendly! သူတို့ကအခါတိုင်းသူတို့လုပ်နိုင်ကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျောပွဖို့ကြိုးစားနဲ့ Eco-သတိကဲ့သို့ဖြစ်ရမှပွဲတော် goers လုပျဖို့မတ်ေတာရ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-festivals-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)